Kitra any Frantsa: nifindra ao amin’ny Clermont FC i Faneva | NewsMada
Kitra any Frantsa: nifindra ao amin’ny Clermont FC i Faneva
Niala tao amin’ny Le Havre, Andriantsima Faneva Ima, kapitenin’ny Barea de Madagascar ary nifindra ao amin’ny Clermont Foot 63. Notontosaina omaly alahady ny fifanarahan’ny roa tonta, haharitra herintaona, azo havaozina. Raha tsiahivina, nandalo fotoan-tsarotra i Faneva, nanomboka ny fiandohan’ity taona ity, tao amin’ny Le Havre, satria zara raha nahazo lalao. Tsy nahatafiditra afa-tsy baolina roa izy, tamin’izany.
Ankehitriny, mitady azy fatratra ny Clermont FC 63, ary manantena fa hitondra ny traikefany, eo amin’ny famonoam-baolina, mandritra ny fifaninanana “Ligue 2”, any Frantsa. 34 taona ny lehilahy, amin’izao fotoana izao, saingy mbola ao anatin’ny tanjany tsara ary mbola manana ny fahaiza-manaony tanteraka.
Raha tsiahivina, ny taona 2007 no tonga tany Frantsa i Faneva Ima, nisantatra ny filalaovana tao amin’ny FC Nantes, ny taona 2007 – 2009. Nifindra tao amin’ny AS Cannes, US Boulogne, Amiens SC, AS Beauvais Oise, US Créteil-Lusitanos, FC Sochaux-Montbéliard ary tao Le Havre, ny farany teo.
Tsiahivina fa hiatrika ny fihaonana hifandonan’ny Barea amin’i Sénégal, ny alahady 9 septambra, ho avy izao, etsy Mahamasina, izy. Lalao tafiditra amin’ny fifanintsanana ny Can 2019.